Misika Yemuriwo Nembatya Yorura Ne COVID-19 - HealthTimes
MUTSVAKURUDZO dzakaitwa nevari kuona nezve denda re COVID-19 munyika ye Zimbabwe, ve COVID-19 taskforce, zvinoratidza kuti nzvimbo dzekutengeserana ndimo muri kutapurianwa chirerwe che COVID-19 zvakanyanya mumaguta makuru e Harare ne Bulawayo.
Vachitaura mu tsamba kuvatapi venhau, gurukuota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko, Minister Monica Mutsvangwa vati ivo vanhu vakawanda havazi ketevedza zvakatemwa ne bazi re World Health Organisation (WHO) kuti vadzivirire chirwere che COVID-19 munyika.
“Pane tsvakurudzo irikuitwa yekutarisa nzvimbo dziri kutsviriridza ne COVID-19 munyika yese. Nzvimbo dziri kutariswa dzinosangasnisira misika yemiriwo muguta re Harare ne Bulawayo. Zvakaonekwa kuti vanhu vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana vachiuya mumisika.
“Ve Harare Rapid Response Team vakaita matest mu Mumbare Musika nezuro nanhasi. Pavanhu vakatestiwa vasere, vakabuda vaine hutachiwana hwe COVID-19. Zvakaonekwa zvakare kuti kune njodzi huru ikukonzerwa mumisika iyi inosanganisira kuungana kwevatengi, kusapfeka ma mask kwevatengesi nevatengi huye kushaya zvimbuzi nemvura yakachena.”
Vati ivo vanoshungurudzika zvikuru nekushaya hanya kweveruzhinji rweZimbabwe maererano nekutevedzera nzira dzekuderedza kupararira kwehutachiwana hwe COVID-19.
“Hunhu uhu hwekuramba kupfeka mamask, kusageza maoko nekuungana huri kuonekwa zvekare munharaunda dzatinogara, mumabhanga nemuzvitoro.”
#COVID19, BREAKING NEWS, HealthTimes VernacularCOVID-19, Mbare